AFGOOYE MA LABA QABIIL BAA KU DAGAASHAY MISE CIIDAN DOWLADEED? | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	AFGOOYE MA LABA QABIIL BAA KU DAGAASHAY MISE CIIDAN DOWLADEED?
Posted on December 23, 2013 by wacyigelin	Waxaa bar wareedyada Soomaalida lagu soo qoray maantay in ay laba garab oo ka wada tirsan ciidamada dowladdu ku dagaaleen Afgooye. Haddaba xaqiiqda dhabta ihi waxay tahay in dagaalkaasi uu dhex maray laba beelood maleeshiyo ka kala tirsan lebisanna dharka ay xirtaan ciidamadu. Dagaalka ayaa sida la sheegay ku bilowday kadib markii maleeshiya qabiileed isbaaro utiil oo baad qaadanasay ay maleeshiya qabiileed kale kusoo duushay si ay iyadu manaafacaadka u hesho. Taas ayaa waxay sababtay in jilibka laysu laabto oo xabadda laysala dhaco sidii caadadu ahaydba. Waa wax iska caadi ah in laysku qabsado isbaarooyinka gaar ahaan kuwa dhaqaale badan uu kasoo xaroodo.
Haddaba maxay tahay sababta loo leeyahay ciidamo dowladda ka wada tirsan ayaa dagaalamay taas oo aan maalin walba maqalno. Runti waa nasiib daro in maleeshiyo qabiileed lagu tilmaamo ciidan dowladu leedahay laakiin aniga waxayba iila muuqataa inay dowladda qudhigoodu tahay maleeshiyo qabiileedyo isu yimid oo iyaguna is dgaala inkasta oo habka dagaalku kala gedisanyahay. Sida caadada ahba waxaa dhacda inay maleeshiyaadkan lagu tilmaamo ciidan dowladeed ay gaystaan dhac, dil, iyo weliba kufsi taas oo aanay jirin cid wax ka qabata. Taa waxaaba kasii daran iyadoo ninka dulman denbiga la saaro oo la xiro ilayn maxkamadihii ayaa iyagana ay ka taliyaan qaaliyaal qabiileedyo difaaca maleeshiyo qabiileedyada. Taas keliya maaha ee beelba beesha ay ka tun waynahay way ka dhibaatogaysi badantahay maadama aanay jirin cid la hadli karta. Miyaanay ceeb ahayn in maleeshiyo qabiil u dagaalamaysa oo ah dad qabiil u dhashay oo soocan lagu magacaabo ciidan dowladeed?
Runti waxay tani ka mid tahay wax qabad la’aanta dowladihii soo maray dalka tan iyo markii ay dhacday dowladii dhexe ee uu madaxda ka aha Siyaad Barre. Sababtu waxay tahay iyadoo ciidamadan ayba ku qaraabtaan dad qabiilka ka tirsan oo soo uruuiya dhalinyaro meel dejiya dabadeedna lacag ku qaata. Tusaale, Waxaa maalin dhowayd la ii sheegay in nin dhalinyaro ah oo ka tirsan beelaha degan Muqdisho uu doonayo inuu ka qaybgalo ciidamada dowladda laakiin shardiga ku xiran in la shaqaalaysiiyo uu yahay inuu la yimaado qori uu ku shaqo tago. Hadde kama hadlayo mar hore ee usbuuci lasoo dhaafay. Ninkan dhalinyada ah wuxuu la soo xiriiray nin ay qaraabo yihiin asagoo ka codsanaya inuu ka caawiyo helida qoriga si uu u shaqo tago. Sidee bay dowladi isugu halayn kartaa askeri qorigiisa leh oo maalinkuu doono iridda kala baxaya? Taa keliya maaha ee maleeshiyaadkan waxay ula hoyaadaan qoryahooda guryohooda iyagoo mararka qaar inta isbiirsadaan dhac iyo dhibaatooyin kale u gaysta bulshada.
Taas keliya maaha ee waxaa maalmahan dagaal ka socday Shabeelada Hoose laysku eedaynayey inay maleeshiyaad beeleed ka mid ah beelihi dgaalku dhex maray iyadoo lagu magacaabayo ciidamada amaanka loo xilsaaray inay kala dhex gasho labada beelood ee dagaalmay. Taas waxay la mid tahay in aad waraabe ari raaciso. Waxaan rejaynayaa inay dowladdu dad aan kasoo jeedin labada qabiil ee dagaalay ay u diri doonto kala dhex galkooda hadii runti la doonayo in wax la xaliyo taas oo ay dad badan shaki ka muujiyeen. Waxaa lagu eedaynaa dowladda inay dhinac la safantahay oo aanu xal xageedaba ka imaan Karin. Tanna waxay tusaale kale u tahay in maleeshiyo qabiil aanay xal keeni Karin habootahyna in la dhiso ciidan isku dhaf ah, qalbaysan, edban, mushaar qaata, wadaninimadana la fahamsiiyo.
Maxaa la gudboon dowladdan waaba hadii ay dowladnimo ka muuqatee? Runti, aniga waxay ila tahay inay dowladdu aynan ogolaanin in maleeshiyo qabiileed meel inta la dejiyo lagu magacaabo ciidan dowladeed. Waa in dowladdu ay wacyigelin u samaysaa dhalinyaradan. Waa inay kafaalo qaadaa nolosha dhalinyarada ciidanka ay ka dhiganayso taas oo aan aaminsanahay inay wax wayn ka tari lahyd xalinta dhibka ay bulshada ku hayaan dhalinyaradan. Nimankan dhalinyarada ah waxaa qaar ku qasba dhaca iyo isbaarada ka dhalanay mushaar la’aan muddo dheer inkastoo qaarkood ayba yihiin dad aad u anshax xun oo ku kaca denbiyo aad u xun xun sida kufsi iyo dil. Waxaan aaminsanahay lacagaha ay lunsadaan dad ka tirsan dowladdu ay waqti dheer mushaar u noqon karaan ciidanka at dowladdu qoranayso.
Hadii ay dowladdu wax ka qaban wayso arimahan waxay u muuqan doontaa sida mooryaan mooryaan kale maamulaysa.
Wixi talo iyo tusaale ah ama su’aal noogu soo gudbi: wacyigelin@yahoo.com
Filed under: Uncategorized « Kenya’s New Media Bill Casts a Dark Cloud for Press Freedom on the Continent WAREYSI PROF CALI MAXAMED GEEDI 22 12 2013 SOMALI CHANNEL »